Yusuf Xaji iyo wasiiro kale oo Somali Kenyan ah oo ku hanjabay in ay is-casilayaan Monday, January 07, 2013 - 12:43 PM Wasiiro Soomali Kenyan ah oo ku hanjabay in ay is casilayaan hadii ciidamada amanka ee xafada Islii aysan joojin falalka xariga iyo Boobka ay kula kacayaan dadka Somalida ah. Full Story: Sadex ruux oo xalay lagu dilay magaalada Gaarisa Friday, December 21, 2012 - 07:59 AM Wararka ka imaanaya magaalada Gaarisa ayaa sheegaya in xalay lagu dilay magaalada sadex ruux oo loo dilay siyaabo kala duwan. Full Story: Daawo Nimankan tuugada ah iyo sida loo ciqaabay xaafada islii Nairobi Thursday, December 20, 2012 - 01:48 PM Laba nin oo tuuga ah oo Soomaali ah oo ay si xun u garaaceen dadkii ay wax ka xadeen xaafada islii ee Soomaalidu dagto Nairobi. Full Story: Watch Mwai Kibaki oo xalay khudbadiisii ugu danbaysay u jeediyay Baarlamaanka dalka Kenya Thursday, December 20, 2012 - 07:29 AM Madax waynaha dalka Kenya Mwai Kibaki oo xalay u jeediyay qudbadiisii ugu dan baysay Baarlamaanka Kenya. Full Story: Labo qarax oo goordhawayto ka dhacay xaafada islii Nairobi Wednesday, December 19, 2012 - 07:49 PM Waxaa caawa ka dhacay xaafada islii labo qarax kuwaas oo ka dhacay masjidka lagu magacaabo Al- Amiin agtiisa. Full Story: Kenya Qoxoontigu waa in ay ku laabtaan xeryaha Dhadhaab Tuesday, December 18, 2012 - 12:32 PM Dowladda Kenya ayaa ku amartay tobanaan kun oo qaxooti ah oo ku nool magaalooyinka inay dib ugu laabtaan xeryaha qaxootiga. Full Story: Christopher atong oo ku guulaystay abaal marintii BBC-da Tuesday, December 18, 2012 - 09:23 AM Christopher Katongo ayaa ku guuleystay abaalmarinta Cayaaryahanka Afrika ee BBC ee sanadka 2012. Full Story: Sadex qarax oo kala danbeeyay oo ka dhacay goordhawayd xaafada Islii Nairobi Sunday, December 16, 2012 - 07:03 PM Qaraxyo sadex ah oo is ka dan dan beeyay ayaa goor dhawayto ka dhacay xaafada islii ee magaalada Nairobi. Full Story: Laba nin oo lagu dilay xeryaha qaxoontiga ee Dhadhaab Sunday, December 16, 2012 - 01:03 PM Waxaa lagu dilay labo nin oo ganacsato ah xeryaha qoxoontiga ee dhadhaab dilkan ayaa waxaa gaystay kooxo hubaysan oo aan lagaranaynin. Full Story: Daawo wiil Soomaali ah oo xalay si arxan daro ah loogu dilay Koonfur Africa Friday, December 14, 2012 - 07:30 PM Waxaa xalay si arxan daro ah loogu dilay dalka Koonfur Africa wiil Soomaali ah halka lagu dhaawacay mid kale. Full Story: Watch Waxaa is-casilay Raysal wasaarihii dalka Mali Tuesday, December 11, 2012 - 12:35 PM Waxaa is-casilay Raysal Wasaarihii, dalka Mali, Cheikh Modibo Diarra,isaga oo is-casilaadiisa kaga dhawaaqay Telefishanka dawladda. Full Story: Daawa Yusuf Xasan oo ka war bixiyay caafimaad kiisa sheegayna in uu wali yahay murashax Tuesday, December 11, 2012 - 08:53 AM Xildhibaan ka Kamankunji Yusuf Xasan oo uu dhaawac ka soo gaadhay Qaraxii ka dhacay Islii ayaa markii ugu horyasay ka war bixiyay caafimaad kiisa. Full Story: Watch Sheekh Umal oo Soomaalida Islii kula dar-daarmay in ay isdifaacaan Booliska Kenyana eedayn u jeediyay Sunday, December 09, 2012 - 08:32 AM Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ka hadlay Qaraxyada ka dhacaya Islii Nairobi sheegayna in ay Soomaalidu isdifaacaan. Full Story: Qaraxii ka dhacay xaafada Islii iyo Xildhibaan Yussuf Xasan oo ku dhaawacmay Friday, December 07, 2012 - 09:20 PM Qaraxii ka dhacay caawa xaafada islii ee magaalada Nairobi ayaa waxa uu dhaawac ka soo gaadhay xildhibaankii laga soo doortay Degmada Kamankunji Yusuf Xasan. Full Story: Qaraxii ka dhacay xaafada Section Three Nairobi ayaa ay ku dhaawac meen 8-ruuxi Wednesday, December 05, 2012 - 07:54 PM Qarax balaadhan oo caawa markay saacadu ahayd abaara 7:30-kii ka qarxay xaafada Section Three ee magaalada Nairobi ayaa gaystay khasaare. Full Story: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 >